Baaritaan lagu sameynayo eedeymaha Qadar ee qaraxii Boosaaso
Xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay warbixintaasi ay tahay "mid aan indhaha laga daboolan karin".
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi, oo kamid ah Golaha Shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay warbixintii wargeyska New York Times.
Qormadaasi ayaa ku eedeysay dowladda Qadar in ay ka dambeysay qarax ka dhacay magaaladda Boosaaso, wallow xukuumada Dooxa ay iska fogeysayna, ayna raacday dowladda federaalka ah.
Fiqi, oo ka tirsan guddiga difaaca Aqalka Hoose, ayaa sheegay in ay walaac ku abuurtay warbixinta, maadaama ay soo kordhayaan weerarada khaarijinta ah ee ka dhacaya caasimadda.
Mudanaha oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay in ay waajibaadkooda ka gudan doonan maqaalkaasi, isla markaana ay baaritaano dhab ah ku sameyn doonan "si ay u xaqiijiyeen xaqiiqada".
Warbixinta oo lagu soo xigtay ganacsade aad ugu dhow Amiirka Qadar oo ay telefoonka kuwada hadleen danjiraha Dooxa ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in talaabadaasi loo qaadey si loo wiiqo danaha Imaaraadka.
"Waa arrin walwalkeeda leh in safiirkii Qadar la yiraahdo wuxuu ku lug-leeyahay shirqoolo iyo qaraxyo ka dhacaya Muqdisho, iyadda oo aan ognahay waxa magaaladan ka dhacaya," ayuu ka sheegay shir jaraa'id.
Qaraxaasi oo ka dhacay banaanka Maxkamadda Xarunta Gobolka Bari bishii lasoo dhaafay ee May ayna sheegatay kooxda Daacish ayaa waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad Sideed ruux.
"Layli ahaan baan u qaadan doonan warbixinta, baaritaan in aan gelino sax ah, warbixin sax ahna kasoo saarno, isha warkaasi haduu sax noqdana ay shacabka Soomaaliyeed ka qaatan talaabada ku haboon," ayuu xusay.
Baaritaanka kadib ayuu cod dheer ku qeexay in ay u gudbin doonan baarlamaanka federaalka ah, kaasi oo kadib go’aan kasoo saari doona. "Arrintan ma ahan mid indhaha laga fiirsan karno, walwal badan ayey nagu haysaa".
Hadalka sharcidejiyaha ayaa imaanaya iyadda oo dowladda Puntland ay codsatay in la baaro xaqiiqada warbixintaasi, inkasta oo xukuumadda federaalka ah ay ka gaabsatay in ay caddeyso mowqifkeeda dalabkaasi.
War kasoo baxay kooxda ayaa lagu sheegay in weerarka ay fuliyeen rag katirsan Garabka...
Wasiirada Amniga maamulada oo ku shiraya Kismaayo [Ujeedka]
Soomaliya 27.10.2018. 11:05
Puntland 16.11.2019. 15:20